विवादमा परेकी लायन जोशीको लायन्स एटुमा उम्मेद्वारी
Posted by abc staff. 1 year,6months ago
अब लायन्सको भविश्य कता ? काठमाडौं । ‘द रेयूकाई नेपाल’ की पूर्व अध्यक्ष शोभा जोशीले लायन्स क्लब ईन्टरनेशनल नेपाल एटुको पाँचौ राष्ट्रिय जिल्ला महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् । विवादमा परेकी लायन जोशीले द्धितिय उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएकी हुन् । लायन्स एटुको महाधिवेशन यहि बैशाख ९ गते शनिबार हुँदैछ । लायन जोशीलाई पूर्व गर्भनर पंकज प्रधानलगायतको समर्थन रहेको चर्चा छ । जोशीमाथि रेयूकाई नेपालमा रहँदा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ ।
निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न दर्जन संघसंस्थाको चेतावनी
Posted by abc staff. 1 year,7months ago
काठमाडौं । अगामी बैशाख ३१ गते हुन लागिरहेको स्थानीय निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग पूर्णरुपमा निषेध गरिनु पर्ने माग राख्दै १३ वटा संघ–संस्थाले सयुक्त वक्तव्व जारी गरेका छन् । बाबबालिकाका निमित्त गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघ–नेपाल (सीएनएफएन) को अगुवाईमा भएको सो कार्यक्रममा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचन पश्यात बालबालिका प्रयोग नगर्न सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।निर्वाचनको मिति तय भइसकेको तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि आचारसंहिता जारी गरिसकेको अबस्थामा उनीहरुको प्रयोग गरिए बालअधिकार विरुद्ध हुने विभिन्न एक दर्जन संघ–संस्थाका प्रतिनिधिअरुले जिकिर गरे ।
'बौद्धस्तुप' भित्र हुने अवैध कार्य विरुद्ध स्थायिन युवाको विरोध
काठमाडौं । विश्व सम्पदा ‘खतरा’ सूचिमा परेको ‘बौद्ध स्तुप’ परिसरभित्रै बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले जथाभावी परिसर र स्तुपमाथि नै पुजा गर्न अनुमति दिएपछि स्थानिय सचेत युवा विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले ‘बौद्ध स्तुप’ विश्व सम्पदा सूचिमा मात्र नभई बौद्ध धर्मालम्बीहरुको पवित्र धार्मिक स्थल भएको भन्दै तुपको परिसरभित्र जथाभावी गर्न दिन नहुने बताएका छन् ।
नेपाली सेनामा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जालो
Posted by abc staff. 1 year, 8 months ago
के मात्र गर्दैनन् कर्ससा’ब कमिशनका लागि ? काठमाडौं । नेपाली सेनामा कमिशन र आर्थिक लाभ हुने भएपछि जस्तैसुकै अवैध काम पनि वैधानिक हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण भेटिएको छ । खाद्य, इन्धन तथा परिवहन महाशाखा प्रमुख कर्णेल यमप्रसाद ढकालको मिलेमतो र निर्देशनमा एकैपटक पाँच वटा बाहिनीले केही महिना नवित्दै एनइएस इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग गरेको ठेक्का सम्झौंता तोडेका हुन् । जबकी उक्त कम्पनीले सम्झौतापछि नियमित राशन सप्लाई गर्दै आएको थियो । सम्झौतापछि पाउने पहिलो किस्ता र राशन सप्लाई बापतको भुक्तानी समेत कम्पनीले अहिलेसम्म पाएको छैन ।
बरिष्ठलाई उच्न्दिै राज्यमन्त्रीको दौडमा कनिष्ठ नेता
Posted by abc staff. 1 year, 11 months ago
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जसले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा किर्तीपुरबाट हराए, उनैलाई नेपाली काँग्रेसमा उपेक्षा गरिएको छ । फुल मन्त्री दिनुपर्ने सांसद राजन केसीलाई राज्यमन्त्री दिन्छु भनेपछि आत्म स्वाभिमानको कारण देखाउँदै उनले इन्कार गरे ।
Posted by abc staff.2years ago
ओएमजीमा खुकुरी हान्ने मनाङ्गेलाई प्रहरीको संरक्षण
Posted by abc staff.2years,6months ago
काठमाडौं । ठमेलमा सञ्चालित ओएमजी क्लबमा एक महिना पहिले खुकुरी प्रहार गर्ने सुशील गुरुङलगायत अन्य पाँच जनालाई प्रहरीले नै संरक्षण दिइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । सुशील गुरुङ मनाङ मस्र्याङदी फुटबल क्लबका अध्यक्ष जिमी गुरुङका छोरा हुन् । पीडितले लौनचौर प्रहरी बृत्तमा उजुरी दिएतापनि अहिलेसम्म उनी पक्राउ नपर्नु पछाडि बृत्तका केहि भ्रष्ट प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्रातेले बतायो । स्रोतका अनुसार बृत्तका सईद्धय राजेन्द्र कटवाल र गंगा पाण्डे डीएसपी सिताराम रेग्मीको पालामा सम्पूर्ण अवैध कामबाट रकम असुल्ने गर्थे । जुवाघर, वेश्यालय, गुण्डा, मसाजलगायत अनगिन्ति ठाउँबाट रकम असुल्न उनीहरु खटिन्थे ।
उजुरीकर्ता नै नआएपछि ठमेलका गुण्डा बम छुटे
काठमाडौं । ठमेलका विभिन्न रेष्टुरेन्टमा बाउन्सरको रुपमा काम गर्ने तथा एमाले निकट मानिएका वकिल बमको गुण्डागिरी चरमचुलीमा पुगेको छ । दुई हप्ता पहिले आलिशान गजलका सञ्चालक विशाल तामाङमाथि कुटपिट गरेपछि गुण्डा बमविरुद्ध लौनचौर प्रहरी वृत्तमा उजुरी पर्‍यो ।
लौनचौर प्रहरीले बमलाई पक्राउ पनि गर्‍यो । तर बमका केहि हुक्केचम्चे प्रहरी र गुण्डाले विशाल तामाङलाई थर्काएपछि उनी नै प्रहरीकोमा उपस्थित भएनन् । पछि प्रहरीले पीडित नै नआएको भन्दै चार घण्टासम्म बमलाई हिरासतमा राखेर छाडिदियो । घटना एक हप्ता अगाडिको हो । ठमेलमा गुण्डागर्दी गर्ने तथा मान्छे पिट्ने कारण बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने गुण्डा बमले यसअघि पनि फायर क्लबमा मान्छे पिटेका थिए । क्लबमा आउने धनी बाउकी छोरीलाई पट्याउने, रक्सीमा नशा हालेर खुवाउने र वेहोस बनेपछि होटलमा लगेर लुट्ने काममा समेत बम सक्रिय रहेको प्रहरीबाट बुझिएको छ ।
अनलाइन सपिङको नाममा यसरी हुन्छ ठगी
Posted by abc staff.2years,7months ago
काठमाडौं । राजधानीमा च्याउ उम्रेसरी ‘अनलाईन सपिङ बजार’ लाई तत्काल करको दायरामा ल्याउन नसके राज्यलाई मासिक करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । सहज इन्टरनेट सेवा र अत्याधुनिक स्मार्ट फोन बोक्ने युवा पुस्ताको बृद्धिसँगै अहिले राजधानीलगायत मुलुकको मुख्य–मुख्य शहरमा अनलाईन सपिङले राम्रो बजार लिएको छ । तर राजधानीमा रहेका अधिकांश अनलाईन सपिङले राज्यलाई कर, भ्याट वा कुनै पनि आम्दानीबापत शुल्क तिर्ने नगरेको प्रमाण फेला परेको छ । अनलाईन सपिङमार्फत नुनदेखि सुनसम्म खरिद हुने गरेको छ । तर अनलाईन सपिङ सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सामान खरिद गर्दा उपभोक्तालाई विल वा भौचर माग नगरे नदिने र दिँदा कर वा भ्याटको विल त परैजाओस्, प्यान नम्बर समेत नभएका विल दिने गरेका छन् ।
किन मच्चिए डीएसपी लोकेन्द्र ?
काठमाडौं । पटक–पटक विवादास्पद काम गर्दै आएका महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीका प्रमुख डीएसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठ फेरि विवादमा मुछिन थालका छन् । डीएसपी श्रेष्ठले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रेष्टुरेन्ट, बार, डिस्को, क्लबलगायतलाई अनावश्यक दु:ख दिने नियतले निहुँ खोज्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दै दु:ख दिइरहेको गुनासो थपिएको छ । सञ्चालक नभेटेपछि कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, बोलाउदा किन नआएको भन्दै ईगो साध्ने गरेको स्रोतको दावी छ । सर्वसाधारण जनताको जिऊ धनको सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न खटिएका प्रहरी यतिखेर कताबाट कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेको यो पहिलो घटना भने होइन् ।
गुण्डागर्दी गर्ने बमको कहाँबाट आयो धन ?
काठमाडौं । राजधानीको मुटु मानिने पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल हत्याउने षड्यन्त्रमा दर्जनौं गुण्डा जन्मिए । ठमेललाई एकताका दिपक मनाङ्गेले एक क्षत्र राज गरे । सो राज तोड्न चक्रपथमा अर्का गुण्डा मिलन चक्रेको उदय भयो । सोही क्रममा दर्जनौं ग्याङवार पनि भए, कतिका हात काटिए, कतिका घर्दन । तर नेपाल प्रहरीको सक्रियतासँगै अहिले मनाङगे–चक्रे युगविलिन हुने क्रममा छ । सोही क्षेत्रको ब्यापार, ब्यवसाय हत्याउन नयाँ–नयाँ गुण्डाको उदय हुने क्रम जारी छ । ठमेलमा विभिन्न रेष्टुरेन्टमा बाउन्सरको रुपमा काम गर्ने तथा एमाले निकट मानिएका वकिल बमको अहिले गुण्डागिरी चर्किएको छ । कहिले फायर क्लबमा त कहिले आफ्नै क्लबमा मान्छे कुटेर विवादमा पर्दै आएका वकिल बमले एक्कासी करोडौं रुपैयाँ नयाँ एक क्लबमा लगानी गरेपछि ठमेलमा हलचल मच्चिएको हो ।
नेविसंघको अध्यक्ष बन्न होडबाजी
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै भातृ संगठन हत्याउने खेल सुरुवात भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण भातृ संगठनहरुको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै यो खेल सुरु भएको हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा निकट मानिएका विद्यार्थी नेताबीचमै यो हानथाप देखिएपछि विवाद कुटपिटमा परिणत भएको छ । यस्को पहिलो प्रभाव पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पसबाट देखा परेको हो । नेविसंघको अध्यक्ष दावी गर्दै आएका जीतजंग बस्नेत र नैनसिंह महरको समूहबीच कुटाकुट भएको हो । महरको क्याम्पमा रहेका शंकरदेव क्याम्पसका सुभराम बस्नेतले पहिला हात हालेका थिए । अहिले देउवाकै क्याम्पका विद्यार्थीभित्रै भिडन्तको स्थिति सृजना भएको हो ।
हुक्का–तमाखुमा प्रहरीले आँखा लगाएपछि.....
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी विक्रमसिंह थापालाई सूचना पुग्यो कि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलस्थित रहेका अधिकांश बार, रेष्टुरेन्ट र क्लबमा हुक्का–तमाखु विक्री गर्ने नाममा लागूऔषध बेचिन्छ, हुक्कामै पनि लागूऔषध राखेर खुवाइन्छ । त्यसलगत्तै एसएसपी थापाले आफ्नो मातहतलाई नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन दिए । सोही निर्देशन पालना गर्ने क्रममा लौनचौर प्रहरी वृत्तका डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौंरले ठमेलका विभिन्न रेष्टुरेन्टबाट हुक्का विक्री गर्नेलाई हुक्कासहित पक्राउ गरेका छन् । प्रहरीले सामान्य हुक्का समेत विक्री गर्न नपाउने सूचना जारी गरेको थियो । केहिदिन पहिले हुक्का विक्री गर्दै गरेका ठमेलस्थित रहेको बुद्ध बार, नगरकोट दोहरी साँझ र पहिलेको फुलमुन अर्थात अहिलेको (हार्डरक) रेष्टुरेन्टबाट हुक्का विक्री गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।